Xadka hal-abuurka marka la sameynayo astaanta ugu yar | Abuurista khadka tooska ah
Astaamaha aad ka heli doonto qoraalkan ayaa ah qayb ka mid ah buuggii naqshadeynta ee 1970. Xaqiiqdii waxaa laga yaabaa inaad ku jahwareertay labada sawir cinwaanka, oo xusuusinaya Flipboard, barnaamij akhrinta warka ah, iyo Beats, oo ah sumcad si fiican loogu aqoonsan yahay sameecadeeda weyn.
Markii aan naqshadeynayno astaan ​​yar (minimalist logo) waxaan ogaan karnaa taas, ka dib markaan fikirka fikradda u wareejino barnaamijka nashqadeynta, waxaan ogaanay taas wax badan ayey u egtahay astaantaas ee summad gaar ah. Marka waxaan ku gaari karnaa xadka khayaaliga ama hal-abuurka si aan u sameysano astaan ​​xoojineysa ugu yaraan.
Haddii aan eegno farshaxanka ama adduunka animation laftiisa, halyeeyo sida Chuck Jones, Warner animator iyo caan ku ah sawiridda sida cid kale ma leh majaajillada Tweety iyo jilayaal kale, soo guuriyey Harold Loyd, loo tixgeliyey mid ka mid ah majaajiliisteyaasha waaweyn ee taariikhda. Waxaa laga yaabaa in nuqulku uusan ahayn ficil sax ah, laakiin waxaa ku dhiirrigeliyay sawirro fara badan oo ka mid ah majaajiliiste weyn, si ugu dambeyn loo siiyo qaabkiisa, wax ka dhigay animator-weynaha Warner, laftiisa laftiisu waxay noqotay wax gaar ah.
Hadda waxaan eegeynaa minimalism-ka qaabeynta astaanta, waana ku laaban karnaa hel waxa niyadda u naqshadeeyayaasha laga soo bilaabo 70-naadkii. Iyo inbadan oo ka mid ah aaggan oo u janjeera in la yareeyo waxyaabaha muhiimka ah iyo in laga siibo walxaha xad-dhaafka ah, sida lagu muujiyey Wikipedia markii ay qeexayso qaabkan sidaas u socda.
Marka waxaan helnaa qaar xaddidaya mala-awaalka aan dhammaadka lahayn in naqshadeeyaha astaantu ay tahay inuu lahaado taasna waa in loo dhiibo si loo abuuro naqshaddaas gaarka ah. Waxaan isku heli karnaa kahor xaddiga xaddidan ee xallinta, laakiin taabashadaas gaarka ah iyo faahfaahinta, waxaan helaynaa waxa noo kala duwan sidii ku dhacday Loyd iyo Jones.
Sidii had iyo jeer ahayd, waxaan kaaga tegayaa tabaruc kale irid kale laga soo galo la xiriira astaamaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Ma jiraa xad u-lahaanshaha hal-abuurka marka la sameynayo astaanta ugu yar?